बलभद्र कुँवर : भगौडा बहादुर ! - फ्री प्रेस नेपाल
विज्ञापन ‘फ्री’ अनलाईन म्यागेजिन
द्वन्द्वपीडितहरुका कथा : न्याय माग्दामाग्दै मरे नन्दप्रसाद, अझै कतिको लिने ज्यान ?
टीकापुरमा राज्यले किन रोप्यो द्वन्द्वको फसल
टीकापुर घटना: राज्यद्धारा फँसाईएका निर्दाेष थारुका कथा
छाँया कम्प्लेक्सभित्र लुकेका अनुहार
कमलपोखरी हडप्ने ११७ बर्षे तिगडम
लक्डाउन १६औं दिन : चिनिया होईन दक्षिण कोरिया मोडालिटी हेरौं
गोवध सम्बन्धि कानुन नै नेपाली समाजको यथार्थको उल्टो छ।
समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नै धरापमा पर्ने खतरा छ
तथ्यको कसीमा प्रधानमन्त्री ओलीको महाझुट
संघीयता धरापमा !
के हामी चिनिया मोडलको एकदलीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरिसकेका हौं ?
कोरोनाले होईन भोकले मर्न थाल्यौं – लक्डाउनले थलिएका गरिखानेहरुका पीडा
लक्डाउन २९औं दिन : अध्यादेश संविधानको मर्म विपरित छ – राजुप्रसाद चापागाईं, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता
लक्डाउन २८औं दिन: यस्तो विपत्तिको बेला आपराधिक मानसिकता भएकोले मात्र अध्यादेश ल्याउँछ – विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ
लक्डाउन २१औं दिन: पसल नथापे खान नपाईने, मण्डीमा छिरे कोरोना संक्रमित हुने डर !
मान्छेलाई पशुभन्दा तल राख्ने धर्मशास्त्र किन काखी च्याप्ने
बुद्धिमान बाँदर र चीनको समृद्धि
दशैंले निल्दै गएको नेवारको मोहनि पर्व
म बाहुन भएकोले बाँचे, तिमी दलित भएकोले मर्‍यौ
नेपालमा जात ब्यवस्थाले वर्ग जन्मायो
अझै पूरा भएन महावीरलाई बुझाउने एक करोडको बाचा
मेडलमात्र थाप्ने कि मुद्दा पनि उठाउने नेताज्यू?
नागरिकलाई भ्रममा राख्ने एनआरएन नागरिकता
ड्रग्स, ड्रिकं , डाङ्डुङ र हङकङका ‘डेन्जर’ नेपाली
प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अमेरिकामा कालो झण्डा
लक्डाउन ३५औं दिन : होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा मारिए मदनदास श्रेष्ठ
लक्डाउन ३४औं दिन : खुद्रे ब्यापारीमाथि नगर प्रहरीको लाठीचार्ज
लक्डाउन ३३औं दिन:डिजिटल मीडिया ‘तथ्यचेक’ मा चुकिरहेको छ – किरण नेपाल, सम्पादक हिमाल साप्ताहिक
लक्डाउन ३२औं दिन: लक्डाउनले मानसिक रोगी बढाउन थाल्यो डा. कमल गौतम, मनोचिकित्सक
लक्डाउन३०औं दिन : अबको १०० दिन रेडियो पत्रकारका लागि ठुलो चुनौतीपूर्ण छ – पवन आचार्य, समाचार प्रमुख(कान्तिपुर एफएम)
Unicode to Preeti – फ्री प्रेस नेपाल
Nepali Unicode – फ्री प्रेस नेपाल
Preeti to Unicode – फ्री प्रेस नेपाल
Nepali Calendar – फ्री प्रेस नेपाल
Nepali Date Converter – फ्री प्रेस नेपाल
Home सबै बिचार
बलभद्र कुँवर : भगौडा बहादुर !
by मनोज घर्तीमगर
१९ भाद्र २०७५, मंगलवार २०:३०
in बिचार, राजनीति
नालापानी किल्लाबाट लड्दालड्दै भागेर पन्जावी सेनामा भर्ती भई त्यसकै निम्ति मरेका हरुवा र भगुवा बलभद्र कुँवरलाई हाम्रो दिमागमा बहादुर र राष्ट्रवादी भन्दै घुसाईन्छ । तर जितगढीमा अग्रेंजी सेनालाई जित्ने कर्णेल उजिरसिंह थापा बारे भने ईतिहास अचम्म लाग्दोगरि मौनधारण गरेर बसेकोछ ।
‘नसुती चारै प्रहर खुबैसित लडे रे बलभद्र कुँवर’
मैले सानोमा खुब घोकेर पढें यो कविता । पढाउने मास्टरले कविता कण्ठ गर्न भनेपछि कनिकुथी पूरै भन्न सक्थे । सायद, मजस्ता धेरै विद्यार्थीले कलिलैमा नालापानीको कविता घोकीघोकी पढेको हुनुपर्छ । मेरो दाइको दावलीले त नपढ्ने कुरै भएन ।
कविता घोकेपछि बालसुलभ दिमागमा चढ्थ्यो– काजी बलभद्र कुँवर भयङ्कर बहादुर हुन् । नेपाललाई बचाउन हदैसम्म लडेका हुन् । दिमागले बलभद्रकोे भब्य आकृति कोथ्र्यो । उनका दह्रा पौंजा (पाखुरी) । घुङ्गरिएका जुँगा । रिसाएको रातापिरा बाघकाजस्ता आँखा । कम्मरमा खुकुरी भिरेका । दायाँ हातमा तरबार र बायाँ हातमा ढाल । दिमागमा बसेको यो दृश्य मेरो मात्रै होइन । नालापानीको कविता पढ्नेदेखी उनको बहादुरीगान सुन्ने लाखौं नेपालीको मनमा छाइरहयो होला ।
बलभद्रको बहादुरीगानमा लेखिएको यो कविता पढेपछि धेरै नेपालीले झैं मैलेपनि नालापानी खोजे । दुर्भाग्य ! नालापानी गढी नेपालको नक्सामा कतै भेटिएन ।
किन लेखियो हारको इतिहास ?
कसले लेखिदियो उनको बहादुरी गाथा ? बलभद्र साँच्चै ‘बहादुर’ थिए वा थिएनन् ? यो आलोचनात्मक सत्य कसैले खोजी गरेन । अहिले नालापानी भारतमा पर्छ । तर पनि गोर्खालीले हारेको युद्ध पनि जितेकैजस्तो गरी गर्विलो गाथा किन गाइयो ?
लडाई जितेर र्फकनु, पछि नहट्नु, युद्ध मैदान छाडेर नभाग्नु, बरु लड्दालड्दै मृत्युवरण गर्नु सच्चा सैनिकको कर्तव्य हो । युद्धमा कर्तव्य पालन गर्ने त्यस्ता सैनिकलाई बहादुर भनिन्छ । लड्दालड्दै युद्धभूमिमा प्राण दिने सैनिक, लडाइमा घाइते हुने र लडाइ जित्ने सैनिक सच्चा देशभक्त र बहादुर हुन् । लडाइको मैदान छाडेर भाग्नु कायरता र सैनिक नियमअनुसार दण्डनीय अपराध हो । यस्ता सैनिकलाई ‘भगौडा’ र ‘कायर’ भनिन्छ । भगौडालाई अपराधसरह मानिने सैनिक नियम छ । भगौडमाथि कडा कारबाही हुन्छ । कोर्ट मार्सल लगाइन्छ । तथ्य यही हो– बलभद्र लड्न नसकेर नालापानी किल्ला छाडेर भागेका थिए । तर युद्धमैदान छाडेर भाग्ने तिनै वलभद्र ‘बहादुर’ कहलिए । हाम्रो बाल दिमागमा उनको बीरगाथा घोकाएर उनको सौर्यगाथा धुमधामले गाउन लगाईयो ।
युद्धस्थल छाडेर भागेका काजी बलभद्र रणजित सिंहको पञ्जाबी सेनामा भर्ती भएको इतिहास छ । भर्ती भएपछि उनले पञ्जाबको तर्फबाट अफगानिस्तानमा लड्दा लड्दै सन् १९२२ (१९७९ चैत ३ गते) मा वीरगती प्राप्त गरे । न उनी गोर्खालीका लागि लड्दा मरे । न उनले लडेको युद्धमा गोर्खालीले जिते । तर आज तिनै बलभद्रलाई बहादुर भनेर पढ्नुपर्छ । आज तिनै बलभद्रको वीरताको कथा पढेर हामी गर्व गर्छौ । वीरताको डम्फु बजाउँछौं । राष्ट्रवादको दुन्दुभि फुक्छौ । सैनिक हेडक्वार्टरदेखि हरेक युनिटमा बलभद्रका तस्बीर झुन्डिएका छन, बहादुरका नाममा । युद्ध हारेका बलभद्रका बडेमानका तस्बीर अहिले पनि ‘वीर विभूति’ का रुपमा किन झुन्डिए सिंहदरबारमा ? यो विषयमा अर्थात बलभद्र कुवँरको बहादुरीबारे आलोचनात्मक चेत सहित गम्भीर बहस किन नगर्ने ?
बलभद्रले लडाइको मैदान मात्र हैन देशै छाडेर हिंडे । पन्जाबका रणजित सिंहको सेनामा भर्ती भएर पञ्जाबका सिमा रक्षार्थ लडाइ गरे । बलिदानी गरे । त्यो न नेपालको लागि थियो न नेपालीले गर्व गर्ने विषय नै थियो । बरु उल्टै युद्ध हारेर, भगौडा भएर अर्काको देशको रक्षार्थ मर्ने काजी बलभद्र बहादुर पो बनाइए ।
यसमा नेपालीको खासै दोष देख्दिन म । कुरा प्रष्ट छ– बलभद्रलाई साम्राज्यवादी कपटी अग्रेंजले बहादुर भन्यो । बहादुर बनाइदियो । उसले बलभद्रलाई बहादुर भन्नुभित्र रहस्य लुकेको छ। अंग्रेजले आफूले बहादुर सेनाका नायकलाई हराउन सफल भएको गौरवशाली गाथा लेख्यो । गोर्खाली युद्धको फेरिहस्त हामीले अंग्रेजहरुले लेखेको गाथाबाट पायौं । त्यो पनि कुनै इतिहासकार बाट नभई युद्धमा संलग्न अंग्रेज जर्नेल, कर्णेल र मेजर र क्याप्टेनहरुले गरेको टिपोट डायरीलाई आधार मान्यौं ।
नेपालले न कहिल्यै गहिरो अनुसन्धान ग¥यौं न आफ्नो इतिहास लेख्न प्रयत्न ग¥यौं । हामीले त तिनका टिपोटको पुनर्लेखन मात्रै गर्न सक्यौैं । बाहिरियाले टिपोट गरेका लेखोटलाई हुबहु सारेर, अलिअलि आफ्ना विचार मिसाएर थर्डह्याण्ड सूचनाका भरमा सैनिक कमान्डरहरुले आफूअनुकुल लेखेको लेखोट र टिपोटलाई आधार मानेर आफ्नो इतिहास खोज्यौं । त्यहि टिपोट र त्यसका आधारमा लेखिएका ईतिहासलाई पनि बिभिन्न पाटोबाट केलाउने प्रयत्न गरेनौं । त्यसैले आजका दिनसम्म हारेको गौरवशाली इतिहास पढ्न बाध्य भयौं । अहिले पनि कक्षा ११ को अनिवार्य नेपालीमा बालकृष्ण समले लेखेको ‘नालापानी’ नामक एकाङ्गी पढाइन्छ, वलभद्रको वीरगाथा गाउँदै । राष्ट्रवादको कथ्य वाचन गराईन्छ । यस्तो गाथा पढ्दै र्हुिर्कएका पुस्ताले आत्मसात गर्ने राष्ट्रवाद कस्तो होला ?
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबिच (नेपाल–अंग्रेज) विभिन्न ठाउँमा भिषण युद्ध भयो । त्यतिबेला अंग्रेजले चार ठाउँबाट युद्ध खोलेको थियो । इतिहासविद् त्रिरत्न मानन्धरका अनुसार मकवानपुर, बुटवल, नालापानी र मलाउको अल्मोडाबाट अंग्रेजले युद्ध खोलेकोमा अल्मोडा बाहेक तीन ठाउँमा नेपालले युद्ध जितेको थियो ।
नेपाल–अंग्रेजबिचको यही युद्धमा नालापानीको किल्ला सम्हालेका थिए काजी बलभद्र कुँवरले । सन् १८१४ अक्टोबार २४ मा अंग्रेजले नालापानी गढीमा आक्रमण गर्‍यो । अग्लो ठाउँको नालापानीमा बलभद्रको मातहतमा महिला तथा केटाकेटी गरी करिब छ सय जना गोर्खाली थिए भनेर इतिहासमा लेखिएको छ ।
सानो संख्यामा रहेका गोर्खालीले नालापानी गढीमाथी आक्रमण गर्ने अंग्रेजलाई भाला, तरबार, भरुवा बन्दुक, खुकुरी धनुवाण र ढुंगामुढाको बलमा अत्याधुनिक हतियारसहित आएका अंग्रेजी सेनालाई दुई पटक हराइदिए । अंग्रेजी सेनाका कर्णेल माबीको मातहतका एक हजार तीन सय पैदल सेना, तीन सय घोडचढी सेना र करिब पाँच वटा तोपले आक्रमण गर्दा समेत गोर्खालीले किल्ला छाडेनन्। गोर्खाली सेनाको जवाफी प्रत्याक्रमणबाट लेफ्टिनेन्ट एलिससहित केही अंग्रेज जवान युद्धमा मारिए ।
अंग्रेजको ठूलो क्षति भएपछि जर्नेल रोबर्ट रोली जिलेस्पीले १८१४ अक्टोबर ३१ मा आफ्नै नेत्तृत्वमा एकै पटक चारतिरबाट नालापानी किल्लामा दोस्रोपटक आक्रमण गरे । जिलेस्पीले मातहतका तीन हजार पाँचसय भन्दा बढी फौजको साथमा नालापानी किल्लामाथि तोपहरु वर्षाएपनि गोर्खाली सेनाले जर्नेल जिलेस्पीसहित थुप्रै अंग्रेज सेना मारिदिए । दुई पटक आक्रमण गर्दा पनि असफल भएपछि कर्णेल माबीले नालापानी किल्लाभित्र जाने पानीको मुहान थुनेर विसं १८१४ नोभेम्बर २६ मा तेस्रो पटक आक्रमण गरे । गोर्खाली सेनाले पानीसमेत पिउन नपाई अंग्रेज सेनासँग बहादुरीपूवर्क लडे ।
लडाइ जारी थियो । नालापानीमा गोर्खाली लड्दालड्दै बलभद्रसहित ७० जना गोर्खालीले किल्ला छाडे। त्यसपछि नालापानी अंग्रेजको अधिनमा गयो । उक्त युद्धमा ३१ अंग्रेज अफिसर, अन्य पद र सिपाही गरि ७ सय ३२ र गोर्खाली तर्फ ५ सय २० जनाले ज्यान गुमाएको इतिहासमा उल्लेख छ । अंग्रेजले त्यतिबेलादेखि गोर्खाली सेनाको बहादुरी गाउन सुरु ग¥यो । नालापानी युद्ध जितेपछि उसले गोर्खालीहरु बहादुरका पनि बहादुर, वीरका पनि माहावीर भनेर विश्वभर दुन्दुभि फुक्यो ।
युद्धपश्चात् नेपालीहरुको पराक्रम र बहादुरीको प्रशंसा गर्दै अंग्रेजले एक युद्ध स्मारकको स्थापना गरे । हाल भारतको देहरादूनस्थित सहस्त्रधार रोडमा रहेको स्मारकको शिलालेखमा –‘हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोरखाहरुको स्मृतिमा सम्मानोपहार’ भनेर लेखिएको छ । यो स्मारक भारतीय पुरातत्व विभागको संरक्षणमा छ । यो विश्वको एक मात्र उदाहरणीय स्मारक हो जहाँ कुनै सेनाद्वारा आफ्नो शत्रु सेनाको वीरतालाई उल्लेख गरिएको छ।
गोर्खालीले हारेको युद्ध पनि जितेकैजस्तो गरी गविर्लो गाथा किन लेखायो अंग्रेजले ? किन उसले नालापानी युद्ध नेपालले जितेजसरी बहादुरीको गीत गाइदियो ? स्मारक बनाएरै किन बलभद्रको वीरगाथा लेखिदियो ? अंग्रेजको कपटीपूर्ण षड्यन्त्र प्रष्ट छ– बहादुर गोर्खालीलाई पनि हराउने अंग्रेज सेना बहादुरको पनि बहादुर हो भनेर देखाउन उसले यस्तो गर्यो ।
तेस्रो पटकमा बलभद्रले किल्ला छाडेर भागेपछि अंग्रेजले नालापानी कब्जा ग¥यो । दुई पटक असफल भएको पिडा बिर्साउन र बहादुर गोर्खालीलाई हराएर अंग्रेज उनीहरुभन्दा पनि झन् बहादुर भनेर संसारभर देखाउन अंग्रेजले बलभद्रको बहादुरीको बढी प्रचार गरेको थियो । अंग्रेजले गोर्खाली सेनाका बहादुर, वीरका पनि वीर, महावीर सेना नायकलाई अंग्रेज सेनाले हराउन सफल भएको गौरवशाली गाथा विश्वभर फैलाउन थाल्यो । बहादुरको बहादुरलाई पनि अंग्रेज सेनाले हराएको भन्दै इतिहास लेखायो । उ आफ्नो कपटी रणनीतिमा सफल भयो ।
नत्र एउटा भनाई छ–इतिहास जित्नेहरुको हो। यहि भनाइलाई मान्ने हो भने अंग्रेजले जितेको र गोर्खालीले हारेको इतिहास पनि जितेजसरी लेखाइयो । किन कि त्यसको फाइदा अंग्रेजलाई थियो ।
नेपालीले पनि अंग्रेजले ‘बहादुर’ बनाइदिएका बलभद्रको गौरवशाली गाथा जिते जसरी गाए ।नेपाली इतिहासमा बलभद्रलाई हामीले अहिलेसम्म बहादुरको हैसियतले पढिरहेका छौं । अझै कति पुस्ताले पढ्ने हो ? यसै भन्न सकिन्न ।
लुकाईएका बहादुरका कथा
सन् १८१४ को लडाइमा हारेकालाई बहादुर भनि हाम्रो मानसपटलमा भर्नेहरुले त्यहि समयमा बुटवलमा युद्ध जित्ने गोर्खाली सेनाका कमाण्डरको बहादुरीलाई चाहिं अत्यन्त चलाखीपूर्वक लुकाएकाछन् । बुटवलको जितगढी किल्लाको एक अंगुल जमिन पनि मिच्न नदिई अंग्रेजलाई पटकपटक लखेट्ने कर्णेल उजिरसिंह थापाको वीरगाथा कुनै पाठमा पढ्न पाईंदैन।पाल्पासम्म पुगेको अंग्रेजी सेनालाई धुइँपत्ताल लखेटेर आफ्नो गढी संरक्षण गर्ने उजिरसिंंहको इतिहास कहानेर छ ? उनले जितेकै भएर अहिले पनि बुटवलको शीरमाथि रहेको जितगढी किल्ला इतिहासको रुपमा साक्षी छ ।
समाजशास्त्री र इतिहासकारहरुले अंग्रेजी कमान्डरका टिपोट, विदेशीले आफ्नो पक्षमा लेखेको बृतान्त, मनगढन्ते तरिकाले बनाईएका वंशावली, तिथि मिति अनि घट्नाक्रम उल्लेख गर्दै तिनको पुर्नलेखन र अपब्याख्याका भरमा लेखेका बाँङ्गो इतिहास पढिरहन बाध्य छौं । सामान्य मान्छेले पनि भन्न सक्छ लडाइको मैदान छाडेर भाग्नेलाई बहादुर हैन भगुवा भनिन्छ । बलभद्रबारे इतिहास लेख्नेहरुलाई तात्कालिक राज्यब्यवस्थाको दवावले बाध्य पारेर यस्तो लेखिएको भन्न सकिएला तर अहिलेपनि त्यहि इतिहासको गाथा गाउनुपर्ने बाध्यता चाहिं किन आईलाग्यो ? कतै बहस भएको कम्तिमा मेरो जानकारीमा छैन ।
बलभद्रको इतिहास पढ्ने धेरैले उनलाई ‘बहादुर’मान्दै आएका छन् । मैले पनि सानोमा बलभद्रलाई ‘बहादुर’ मानेको हुँ । उनीबारे लेखिएको कविता कण्ठ गरेकै हुँ । तर, किन हो किन इतिहास पढ्दै गर्दा बलभद्रबारे लेखिएका विरोधाभाष जस्तै देखिने कुराले मभित्र आलोचनात्मक चेत खुल्यो । कुरो बलभद्रको मात्र होइन । जब मैले पढेका नेपाली इतिहासमध्ये धेरैमा यस्तै विरोधाभाष लाग्ने कुरा भेटिए मभित्र सत्यतत्थ्य खोतल्ने चेतनाको विकास बढेर गयो । चुरो कुरो बुझ्ने हुत्हुति जाग्दै गयो ।
बलभद्रको इतिहास पढ्दा लाग्थ्यो– उनी त साँच्चिकै ‘बहादुर‘ हुन् । नेपालको सिमाना बढाउन र नेपाल बचाउन लडेका हुन् । विभिन्न किताब, स्मारिका, संग्राहलय, नेपाली सेनाका मुख्यालय, अनि हरेक युनिटमा झुन्डिएको बलभद्रको तस्वीर आँखाभरी झलझली आउँथ्यो । विभिन्न ठाउँमा ठडिएका बलभद्रका शालिक सम्झना आउँथ्यो । तर अहिले बढेको आलोचनात्मक चेतले थाहा भो– यो त सबै हाम्रो दिमागमा भरिदिएको कसैको स्वार्थले ओतप्रोत बिषाक्त ज्ञान पो रहेछ !
पटक–पटकको आमक्रणमा व्यहोर्नुपरेको क्षति बिर्सन र तेस्रो पटक कपटी तरिकाले नालापानी कब्जा गरेपछि गोर्खालीभन्दा आफूलाई ‘बहादुर’ देखाउन अंग्रेजले बलभद्रलाई विश्वभर ‘बहादुर’ भनेर मार्केट गर्न पो यस्तो गरेको रहेछ।
अंग्रेजले प्रोपोगान्डा रचेर इतिहासमा बलभद्रलाई ‘बहादुर‘ बनाईदियो । यदि अंग्रेजले गोर्खालीहरुलाई साँच्चिकै ‘बहादुर’ देखेर हाम्रै लागि प्रचार गरिदिएको हो भनेर मान्ने हो भने नेपाल–अंग्रेज युद्धमा जितगढी किल्लाबाट अंग्रेजलाई धुलो चटाएर लखेट्ने कर्णेल उजिरसिंह थापालाई अंग्रेजले किन ‘बहादुर’ देखेन ? जितगढी युद्धमा पाँच अफिसर र एकसय २८ अंग्रेज सिपाहीलाई मारेर बाँकीलाई उतै लखेट्ने गोर्खाली कमान्डर उजिरसिंहको बहादुरी किन प्रचार गरेन अंग्रेजले ? किन उजिरसिंहको बहादुरी गुमनाम बनाइयो ? सन् १८१४–१६ सम्म चलेको नेपाल अंग्रेज युद्धमा जताततै नेपालले हारे पनि जीतगढी मात्रै यस्तो किल्ला हो, जहाँबाट उजिरसिंहको नेत्तृत्वमा रहेको गोर्खाली सेनाले अंग्रेजलाई लखेटेको थियो ।
यसको उत्तर सिधा छ– ‘अंग्रेजले गोर्खाली बहादुरसँग आफूले हारेको इतिहास दबाउन चाहन्थ्यो ।’ उसले ‘बहादुर’ गोर्खालाई अंग्रेज सेनाले हराएको इतिहास मात्रै लेख्न चाहन्थ्यो ।
(गोर्खा भर्तीमाथि लेखिएको पुस्तक ’भर्तीको फन्दा’ का लेखक पत्रकार मनोज घर्तीमगरसंग गरिएको वार्तामा आधारित )
Tags: issue-1Manoj Dhartimagarअंक-१मनोज घर्तीमगर
किन समातिदैनन् ‘मार्सी ब्रान्ड’ प्रसाई
Prem Rai says:
Balbhadra kunwar ra BP Des bhakta Bp le Nepallai Bharatko upanibes banauchhu bhane jastai Des Bhakta haru hun
यो हप्तामा लोकप्रिय लेखहरू
Copyright © 2018-20 Free Press Nepal.